China Outdoor Illuminated Led Front Shop Lighting Signbord ndị na-emepụta na ndị na-ebubata ngwaahịa |Zhengcheng
1.The zuru ìhè igbe bụ ike na-eri, na ya na-arụ ọrụ ọkụ na-emebi ngwa ngwa.Ihe odide ndị a na-eduzi anaghị apụta ìhè n'abalị, na ihe ndị na-egbuke egbuke na-adịkarị mfe ịnweta ìhè.
2.Traditional signboards na-akasị mere na mkpokọta , na mmezi na-achọ ike ọkachamara, na mmezi na-eri bụ elu, ma ọ bụ ọbụna-agaghị ekwe omume ịrụkwa, n'ihi na elu ojiji efu.
3.Repair ọrụ dị oke egwu, ya mere mgbe oge akwụkwọ ikike, ndị na-emepụta adịghị njikere ịrụzi ihe ịrịba ama.
Nsogbu ndị anyị meworo
1. Igbe ọkụ nke Zhengcheng bụ nke mpempe akwụkwọ acrylic, na-eji tube oriọna patented, nchapụta dị elu, tube oriọna LED ejiri igbe ọkụ acrylic, nnyefe ọkụ dị mma, ìhè edo.
2. Igbe ọkụ nke Zhengcheng na-agbaso ụkpụrụ modular, na otu igbe ọkụ na-eji eriri LED dị iche iche, nke dị mfe iji nọgide na-enwe ma belata ụgwọ ọrụ.
3. Usoro nrụzi ihe nrịbama ọdịnala na-agbagwoju anya, na ọtụtụ ndị na-emepụta ihe nrịbama adịghị njikere ịrụzi akara ngosi ahụ, mana igbe ọkụ nke Zhengcheng dị mma iji rụkwaa ya, a pụkwara ime ya n'oge.
Ọtụtụ ụlọ ahịa dị mma na nnukwu ụlọ ahịa na-ahọrọ imeghe ụlọ ahịa na nkwụsịtụ, ma nhazi nke ihe ịrịba ama bụ nnukwu nsogbu.Akara ngosi n'ihu ụlọ ahịa Zhengcheng nwere ọtụtụ igbe ọkụ gbawara agbawa iji dozie nsogbu nke curvature.N'otu oge ahụ, oriọna LED nwere nnukwu ọkụ.Ọ na-adọrọ mmasị karị ma maa mma n'abalị.
Nke gara aga: Akara mgbasa ozi acrylic na-egbochi mmiri n'èzí
Osote: Ihe nrịbama dị n'èzí Led maka ụlọ ahịa dị mma wowo
Ihe nrịbama ụlọ ahịa, Akara ngosi, Vacuum Forming Light Igbe nbanye, Ihe nrịbama ụlọ ahịa ọgwụ, Igbe nrịbama nke ọnya ọkụ, Igbe nrịbama nke mpụga,